Nepali Rajneeti | कमाउन मलेशिया पुगेको थिए, ३० टनको केमिकलको ट्याङ्की भित्र ख’स्न पुगेँ, शरीरको ७२ प्रतिशत शरीरको भाग ज’ल्यो
कमाउन मलेशिया पुगेको थिए, ३० टनको केमिकलको ट्याङ्की भित्र ख’स्न पुगेँ, शरीरको ७२ प्रतिशत शरीरको भाग ज’ल्यो
अषोज २३, २०७८ शनिबार ३५५ पटक हेरिएको
मेरो घर स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिका हो ।
म वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा २०६१ सालमा मलेसिया गएको थिएँ । जान त म पनि उज्ज्वल भविष्य र पारिवारिक सुखको बाटो खोज्दै मलेसिया पुगेको थिए ।
स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिका ५ स्थायी ठेगाना भएका कृष्णको वैदेशिक रोजगारीको पि’डा यसरी सुरु हुन्छ । मेरो काम मलेसियाको एक आयल कम्पनीमा थियो । यहाँबाट जाने बेलामा नै म यही कम्पनीमा गएको हुँ ।
तर जे सोचेर गएको थिएँ त्यसो भएन । जे नसोचेको थिएँ त्यही भयो ।काम गर्ने सिलसिला साबुन बनाउनका लागि राखिएको ३० टनको केमिकलको ट्याङ्की भित्र ख’स्न पुगेँ । जसले गर्दा मेरो शरीरको ७२ प्रतिशत शरीरको भाग ज’ल्यो ।
ट्याङ्की केमिकलले भरिएको थियो । त्यही माथि टेकेर काम गर्न पर्थों । काम गरिरहेको थिए । तर त्यसको ढकन कोल्टि यो । अनि म त्यो भित्र ख’सेँ । कम्पनीमा मसँगै काम गर्ने साथी लम्जुङ्गका चन्द्र बहादुर थापाले मलाई उ’द्धार गर्नुभएछ ।
सायद उहाँ नभएको भए मेरो शरीर त्यसै ट्याङ्कीमा ख’रानी हुने थियो । भगवानले उहाँलाई मेरो छेउमा पठाइदिनुभएछ जस्तो लाग्छ अहिले त ।त्यो दुर्घ’टनापछि मेरो मलेसियाकै अस्पतालमा झण्डै ७ महिना उपचार भयो । तर मलाई विदेशी अस्पताल भए पनि त्यहाँको उपचार खास चित्त बुझेन ।
मैले आफ्नै देश फर्किएर उपचार गराउने निधो गरेँ । काठमाण्डौमा आएर टिचिङ अस्पतालमा उपचार गराएँ । मेरो घरमा सबै जनाले खेतीपाती गर्नुहुन्छ । तर पनि हामी आर्थिक हिसाबले असाध्यै कम’जोर होइन । जग्गा जमिन प्रशस्त छ ।
तर म भने देशमा रोजगारीको अवसर नपाएर मलेसिया गएको हुँ । पढेलेखेको पनि हुँ । तर जागिर पाइएन अनि के गरेर बस्नु । त्यसैले हो मैले विदेशको बाटो रोजेको पनि ।तर रोजगारीको आसमा झण्डै ज्यानै गयो ।
केमिकलमा ज’लेका कारण खुट्टाको औँला समेत का’ट्न प¥यो । अहिले पनि मेरो शरीरमा घा’उका खतहरू छन् । पुरै सर्जरी गरियो । लाखौँ रुपैयाँ खर्च भयो तर शरीर पूर्ण रुपमा निको भएन । जान त म पनि कमाउन भनेर नै गएको थिएँ । तर परदेशी भूमिमा टेकेको १८ दिनमै मैले जीवनभरिलाई पुग्ने पी’डामा डुबेँ ।
स्वस्थ मानिस जसरी हिँडडुल गर्न सक्दिनँ । बैसाखीको सहायताले हिँड्छु । स्याङ्जाबाट बसाइसराइ गरी अहिले हामी नवलपरासीको बर्दघाट १० मा बस्छौ । श्रीमती, दुई छोरा र एक छोरी छन् ।
अहिले त बुहारी पनि छन् । शरीर ज’ले पनि मेरो मनलाई परिवारले ठुलो हौसला दियो । मलाई कहिले एक्लो र कम’जोर महसुस हुन दिएनन् । अहिले ४९ वर्षको भएँ । म हुन त पूर्ण रूपमा अ’पाङ्ग हुँ ।
तर राज्यले पहिचान गर्न सकेको छैन । मेरो कुनै परिचयपत्र छैन । मलाई सरकारले कुनै सहयोग उपलब्ध गराएको पनि छैन । तर मेरो साथमा परिवार छ । कमाउँछु, जमाउँछु भनेर प्रयास नगरेको त कहाँ हो र ? तर झण्डै जीवन गयो । त्यसैले म अहिले जे छ त्यसमा खुसी छु । उज्यालो अनलाईन बाट
विश्वविद्यालयले गल्तीले छात्रालाई फेल भएको इमेल पठायो, २१ वर्षीयाले गरिन् आ’त्म’ह’त्या
अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले गरे दसैंको टीका ग्रहण !
चिनियाँ राजदूतले लगाइन् बिजया दशमी टीका (फोटो फिचर)
कतारमा ईलिगल बस्नेहरुलाई खुशीको खबर: जरिवाना र कैद बिना नै आममाफी
बिहीबार बिहान गएको भू’कम्पमा परी कम्तीमा २० जनाको मृ’ त्यु
दिल्लीको आकाशे पुल मुनि यसरी फँस्यो एयर इन्डियाको विमान ! (फोटो/भिडियो)